BAYDHABO: Mukhtaar Roobow oo booqday Saldhigyo Ciidan
By Wariyaha Baydhabo , Garowe Online
BAYDHABO, Soomaaliya- Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansoor oo kasoo mid noqday saraakiisha sar sare ee ururka Al Shabaab dhawaana isu dhiibay dowladda Soomaaliya ayaa booqday saldhigyo ku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Wadaadkan oo dhawaan tagay gobolka Bakool maalmo kahorna lagusoo dhaweeyay xarunta gobolka Baay, ayaa la sheegay inuu tagay dhowr saldhig kuwaasoo uu codsaday in la geeyo.
Afhayeenka Maamulka Koofur Galbeed Nuuradiin Gacma, ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Mukhtaar uu booqday saldhigyo ciidan, inkastoo uu ka cudur daartay inuu magacaabo goobaha ay yihiin iyo meesha ay ku yaallaan, hadana wuxuu ballan qaaday in dowladda Soomaaliya dhawaan faah faahin ka bixin doonto socdaalka Sheekhan iyo meelaha uu tagay.
Ninkan oo taageero ka haysta shacabka Koonfur Galbeed ayaa la sheegay in dowladda Soomaaliya ka leedahay ajande ah inay ku jihayso ururkii uu horay uga tirsanaa ee Al Shabaab.
Lama oga qaabka uu u marayo, balse Roobow waxaa ka amar qaata Mallayshiyaad kasoo jeeda Beeshiisa kuwaasoo ku sugan gobolka Bakool, waxaana wararka qaar sheegayaan in dowladda Koonfur Galbeed, shacabka iyo xukuumadda Soomaaliya waydiistay sidii loo taageeri lahaa si ay ula dagaallamaan ururka Al Shabaab.
Mukhtaar oo noqday ku-xigeenka Hogaamiyaha Al Shabaab, ayaa ururkan ka goostay 2013, isagoo wixii intaas ka dambeeyay ku dhuumaalaysanayay gobollada Baay iyo Bakool.
Roobow oo codsi u gudbiyay Xildhibaano Xabsiga ku booqday
Soomaliya 28.12.2018. 11:28
Dowladda Soomaaliya ayaa la wareegtay taleefonka gacanta Mukhtaar Roobow.
Lafta Gareen oo shaaciyay talaabada ugu horeysay uu qaadayo
Soomaliya 25.12.2018. 10:35
Caqabadaha ugu waaweyn ee horyaalla Madaxwayne Lafta Gareen?
Soomaliya 20.12.2018. 12:21
Shuruudaha laga rabo Musharaxiinta KG oo lasoo saarey [Akhri]
Soomaliya 02.11.2018. 16:19
Mukhtaar Roobow oo laga dejiyay Muqdisho, loona gacan geliyay NISA
Soomaliya 13.12.2018. 15:28
Roobow oo ka hor-yimid go'aankii DF xili uu sii wato Ololohiisa
Soomaliya 06.10.2018. 16:57
Lafta Gareen oo booqasho ku tagey magaalada uu kasoo jeedo Roobow [Sawirro]
Soomaliya 29.12.2018. 17:01
Musharixiinta KG oo la diiwaangelinayo iyo cabsi jirta
Soomaliya 25.11.2018. 10:11
Dib u dhac ku yimid furitaanka kalfdhiga baarlamaanka Somaliland 31.05.2020. 16:55